Wasaarada Waxbarashada Oo Shaacisay Dirayska Cusub Ardayda Dugsiyada Somaliland Xidhanayaan Iyo Goorta Uu Hirgalayo - Xogside
Home WARARKA DALKA SOMALILAND Wasaarada Waxbarashada Oo Shaacisay Dirayska Cusub Ardayda Dugsiyada Somaliland Xidhanayaan Iyo Goorta...
Wasaarada Waxbarashada Oo Shaacisay Dirayska Cusub Ardayda Dugsiyada Somaliland Xidhanayaan Iyo Goorta Uu Hirgalayo
Wasiirka wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Somaliland Md Axmed Maxamed Diiriye (Toorno) oo uu weheliyo Agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Axmed Abokor Maxamed ayaa shaaciyey in la bedelay dirayskii ay xidhan jireen ardayda dugsiyadda kala duwan ee Somaliland wax ka barta, iyaga oo soo bandhigay nooca uu noqon doono dirayska ay xidhan doonaan Ardayda dugsiyadda dalka wax ka bartaa guud ahaan.
Wasiir Axmed Maxamed Diiriye (Toorno) oo ugu horeyn ka hadlay bedelka iyo nooca dirayska ay xidhan doonaan ardayda guud ahaan dugsiyadda Somaliland wax ka bartaa ayaa sheegay in iyada oo wasaaradda waxbarashada iyo Saynisku la tashanaysa dhinacyadda wadaageyaasha waxbarashada ay soo saartay go’aan lagu midaynaayo dirayska ardayda dugsiyadda Somaliland dhigataa,laga soo bilaabo heerka barbaarinta ilaa dugsiyadda sare.
Ardayda heerka barbaarinta ayaa dirayska ay gashan doonaan noqon doonaa surwaal ama goono Cagaar ah ,halka fasalka kowaad ilaa fasalka afraadna ay xidhan doonaan surwaal iyo goono Kaaki ah,halka shaadhka iyo dalladuna ay noqon doonaan Caddaan oo ay ka sinaan doonaan.
Ardayda dugsiga dhexe ee fasalka Shanaad ilaa sideedaad ayaa iyaguna xidhan doona surwaal ama Goono midabkeedu Casaan ama boordoo yahay ,halka Shaadhka iyo Dalladuna ay noqon doonaan Cadaan.
Ardayda Dugsiyga sare ayaa xidhan doona surwaal iyo Goono Madow ah iyo shaadh iyo dallad cadaan ah.
Dhammaan heerarka kala duwan ee dugsiyadda waxbarashada Somaliland ayay Dalladda Habluhu xidhaan iyo shaadhadhka wiilashu xidhaan noqon doonaan kuwo cadaan ah,iyada oo ay kala duwanaan doonaan Surwaalka iyo Goonooyinku,waxaana dirayskan xidhan doona dugsiyadda gaarka loo lee yahay iyo kuwa dawladda oo ka sinmi doona.
Wasiir Axmed Maxamed Diiriye (Torno) waxa uu sheegay in dirayskan loo simay, si aanay ardaydu u kala dirays noqon ,isla markaana ay dirays ahaan u sinnaadaan iyo si ardaygu marka uu bedelanaayo uu dirayskiisa la bedesho oo aanu dirays kale doonan,waxaanu tilmaamay in loo baahan yahay in Buuggaagta iyo dirayskaba ay dugsiyadda Somaliland ka sinmaan.
Geestiisa Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Somaliland Axmed Abokor Maxamed oo isna ka hadlay bedelka noocyadda dirayska dugsiyadda waxbarasho ee Somaliland ayaa sheegay in go’aankani yahay mid ay ka wada tashadeen qaybaha kala duwan ee waxbarashaddu, isla markaana uu go’aankani kusoo baxay wada tashiyadaas,isaga oo cadeeyey in loo baahan yahay in la hirgeliyo.
Agaasime Axmed Abokor Maxamed waxa uu sheegay in dirayskani noqon doono mid sima ardayda dugsiyadda Somaliland, isla markaana qiime ahaan macquul noqon doona.
Dirayska ay ardayda dugsiyadda Somaliland ku yaalla ay xidhaan ayaa sannadkan wasaaradda waxbarashada iyo Sayniska Somaliland Midaysay, waxaana uu go’aankan ay wasaaraddu soo saartay dhaqan geli doonaa marka laga soo noqdo fasaxa xiligan ay ardaydu ku jiraan oo ku beegan 3.07.2021-ka.
Previous articleWasaarada Beeraha Somaliland Oo Qalabka Beerashada Casriga U Kala Dirtay Gobolada Barriga
Next articleBulsho Diiday Inay bedelaan Nolosha Qadiimka Ah